kembo mohadi on News24
ARTICLES RELATING TO KEMBO MOHADI
Zimbabwe's vice president Kembo Mohadi has dismissed claims that President Mnangagwa and Nelson Chamisa of the Movement for Democratic Change are in talks for a unity government.
The chief editor of the newspaper that printed the story is standing by it, saying it came from credible sources.
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa has said a hand grenade was to blame for the election rally blast that killed two people last week, state media has reported.
Top Africa stories: Man kills 1 000 cats, Zim bomb blast
A Kenyan man has reportedly confessed to killing more than 1 000 cats, and selling their meat to unsuspecting samosa vendors, and a Zimbabwean VP aide has narrated how he survived the explosion that left at least 49 people injured at a Zanu-PF rally.
A blast that rocked a rally in which Zimbabwe's president Emmerson Mnangagwa narrowly escaped unscathed injured at least 41 people, including his two deputies, the country's health minister has said, adding that there were no fatalities.
LATEST: US, Britain condemn attack at Zimbabwe rally
The United States is condemning the attack on a campaign rally for Zimbabwe's president, which state media has called an assassination attempt.
Zimbabwe's main opposition, the Movement for Democratic Change party has reportedly said that it is not desperate to form a government of national unity with the ruling Zanu-PF party.
Zim govt 'threatens to revoke operational licences from businesses inflating prices' – report
The Zimbabwean government has reportedly threatened to revoke operational licences from businesses that are inflating prices, as it tries to stop an economic meltdown triggered by recent fiscal reforms.
MDC leader Nelson Chamisa is said to have demanded the sacking of deputy presidents Constantino Chiwenga and Kembo Mohadi before he can consider working with the president.
Zimbabwe's president has re-appointed as one of his vice presidents a former military general who helped him take power.
At least two suspects have been charged for the recent grenade bombing that has left at least two people dead and nearly 50 others - including two senior government officials - wounded, a report says.
A Zimbabwean Security and Intelligence Officer, who sustained a fracture on his right shoulder and a deep wound, has reportedly narrated - from his hospital bed - how he survived the explosion that left at least 49 people injured at a Zanu-PF rally in Bulawayo over the weekend.
Zimbabwe leader Emmerson Mnangagwa as described an attempt to assassinate him "a cowardly act", adding that the incident will not disrupt the country's historic elections next month.